आलिया अब हलिउडतिर ! - Everest Dainik - News from Nepal
आलिया अब हलिउडतिर !
काठमाडौंः बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टको पछिल्लो फिल्म कलंकले बक्स अफिसमा खासै कमाल गर्न सकेन । तर, पनि आलिया भट्टको क्रेज भने बढिरहेको छ । अभिनेत्री आलियाको साथमा कयौं बलिउडहरु छन् ।
यसैबीच अब प्रियंका चोपडा र दीपिका पादुकोणपछि आलिया भट्टले पनि हलिउड उद्योगतिर मुभ हुनका लागि आफ्नो पाइला चालिरहेकी छन् । अहिलेको समय उनी लश एञ्जिलसमा छन्, जहाँ उनी त्यहाँका सडकहरुमा रमाइरहेकी छन् ।
याे पनि पढ्नुस रणवीर र आलियाको ‘ब्रेकअप’
एक सुत्रका अनुसार आलियाले चाँढै हलिउडमा इन्ट्री गर्दैछन् । एक सोसल मिडिया पोस्टका अनुसार लश एञ्जिलसको बेवर्ली हिल रोस्टुरामा आलिया भेटिएकी थिइन् । जानकारी अनुसार उनका असल साथी आकांक्ष रंजन कपुरसँग लस एञ्जिलसमा छुट्टी मनाइरहेकी छन् ।
अहिले उनी इन्टरनेशनल सेलिब्रेटी एजेन्टको खोजीमा रहेकी बताइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस बिहे गर्ने तयारीमा आलिया र रणवीर
ट्याग्स: आलिया भट्ट
८ प्रहरीको हत्या आरोपी दुबे पक्राउ
बाढी पहिरो पीडितको राहत तथा उद्धारमा जुटन प्रचण्डको अपील
सिन्धुपाल्चोकमा बाढीको बितण्डाः अहिलेसम्म के–कति भयो क्षति ?